Qaaxada ma la gudbiyaa? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulQaaxada waxaa loo gudbiyaa Metrobüste?
Qaaxada waxaa loo gudbiyaa Metrobüste?
20 / 12 / 2018 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, Metrobus, TURKEY
Waa qabow, waxaa jira hargab hargab. Gaar ahaan, khubarada ayaa dareen ka muujinaya deegaanno badan iyo gaadiidka dadweynaha. Laakiin ma ogtahay in khataraha kale ee aad ku sugayso baabuurta sida metrobus? Cudurrada Cudurada Qaliinka Dr. Serdar Kalemci, Tiibishada Qaaxada ee tiibayda ah oo siiyay macluumaad muhiim ah.
Qaaxada, oo sida badan loo yaqaano tiibishada, ayaa sii socota iyada oo aan la dareemin. Cudurka qaaxadu waa qofka ugu nuglaanshaha badan. Cudurku wuxuu dhacaa kaddib marka 1 bilood, 10 sano ka dib ... Jeermiga ayaa sugi kara wakhti dheer oo jidhka ka difaacaya inuu dhaco. Isbitaalka Takhaatiirta Gebze Gebze Cudurrada Cudurada takhasuska ah. Dr. Serdar Kalemci, ayaa ii sheegtey sida cudurka qaaxadu u qabadsiiyo.
KALA IYO Qufac
Cudurka qaaxada (TB) wuxuu ku noolaan karaa hawada muddo dheer qorraxda. Raajooyinka Ultraviolet ee qorraxda ayaa dila microbe qaaxada waqti gaaban. Sababtan awgeed, meelaha ugu badan ee dadku ku badan yahay, dadka leh hawo aan ku filneyn, oo aan lahayn qorraxda ayaa ah meelaha ugu khatarsan ee gudbinta. Metrobus, baska, diyaaradaha, sida gaadiidka dadku ku badan yahay waa meel khatar ah. Qaaxada, oo loo yaqaan 'cudur khafiif ah' ee dalkeenna, si sahlan ayaa loogu gudbin karaa nidaamka neefsiga, sida hargabka. Jeermiga waxaa lagu kala qaadaa infekshinka dhibicda ah, laakiin maaha shukumaan, fargeeto, mindi, ama cunto uu isticmaalo qofka. Marka bukaanku si caadi ah u hadlayo, qufacayo ama hindhisayo, dhibcooyinka ku faafaya bay'ada waxaa lagu gudbiyaa nacaybka qofka kale.
WAA MAXAY RISK?
Haddii qofku iska caabbiyo jidhku wuu hooseeyaa, jeermisku wuxuu bilaabmaa inuu waxyeeleeyo xubnaha. Bukaan-jiifka xubinta taranka, kansarka, kelyaha, beerka, cudurada wadnaha, sonkorowga, COPD iyo neefta ayaa ka mid ah kooxaha halista ah. Nafaqada liidata, cayilku, sigaarka iyo sigaarka ayaa sidoo kale daciifiya xasaanadda. Microbe qaaxada waxaa loo gudbiyaa jirka muddo gaaban adoo ka taxadaraya waqtiyadaas.
Si kastaba ha noqotee, 30, microbe qaaxadu wuxuu u shaqeeyaa si uu u gaaro sanbabada. Kaliya boqolkiiba boqol bukaankani waxay u badan tahay in ay qabaan qaaxo goor noloshooda ah. Sidaa awgeed, qatarta cudurka qaaxada ee dadka la xiriirta bukaanku waa mid aad u hooseeya marka loo eego cudurrada sida hargabka. Gaar ahaan, carruurta, dadka waayeelka ah, dadka qaba cudurrada kale ee hoos u dhigaya iska caabbinta jidhka, ama dadka isticmaala daroogooyinka hoos u dhigaya iska caabbinta jirka waxay u baahan yihiin inay si gaar ah u taxaddaraan.
WAXAA LAGA HELI KARAA MACLUUMAAD KA HELO!
Cudurka qaaxadu wuxuu inta badan ku lug yeeshaa sanbabada iyo hadiyadaha ay ka heleen natiijada hay'adan. Calaamadaha ugu caansan ee tiibaydu waa qufac wakhti ka badan hal usbuuc, dhiig xinjir, qandho, dhidid habeenkii, daal, daal, miisaan lumis, cunto xumo. Bukaanku ma laha cabashooyin kasta. Cudurka qaaxadu wuxuu sababi karaa cudurada dhammaan xubnaha, ma aha oo keliya sanbabada, laakiin waxay bixin kartaa caddaynta hay'adan. Tusaale ahaan, qoorta, weyn, qanjirada adag ee qoorta ayaa laga yaabaa inuu soo jeediyo qaaxada. Anorexia ayaa sidoo kale laga yaabaa in lala xiriiriyo qaaxada mindhicirka.
HALKAN HADDII AAD KA HELI KARO
Wakhtiga uu halis u yahay inuu cudurka ku dhaco waa kan ugu sarreeya labada sano ee ugu horreysa. Dadka ugu khatarsan ee la isugeeyey waa xubnaha qoyska iyo asxaabta dhow ee ku wada nool isla guriga bukaanka muddo dheer. Qofka jirran waa inuu xirto maaskaro guriga marka ugu horeysa ee usbuuca 2 ee daaweynta. Ka dibna maskaxda waa laga saari karaa. Dadka guriga ku nool waa in lagu hubiyaa cudurka. Ugu yaraan waa in daawada 4 loo isticmaalo horraantii si loo dilo jeermiska qaaxada iyo ka hortagga inuu ka sii faafo. Marka la eego natiijooyinka baarista xaakada, tirada daroogada ayaa hoos loo dhigi doonaa ka dib marka ay 2 ama 3 bilood.
DAAWEYNTA ISKUULKA WAXAAD KA HELI KARAA 6 BILOOD
Tan iyo jeermiska qaaxada ayaa si tartiib ah u koraayo jeermiska kale, waa muhiim in la isticmaalo daawooyinka muddo dheer oo joogto ah. Muddada daaweynta wadarta guud waa ugu yaraan 6 bilood. Muddadan, Qaaxada Qaaxada waxaa lagu hubiyaa xaako iyo filim sanbab. Haddii bukaanku uusan si joogto ah u isticmaalin dawadiisa, jeermiska ayaa hor istaagaya daawada iska caabinta. Noocaan cudurkan, oo aan ugu yeerno 'qaaxada daawada u adkaysata', daaweyntu way ka sii adag tahay; Daawooyin badan ayaa loo baahan yahay in la isticmaalo bilaha 18-24. Sidaa daraadeed, waa habka daaweyn ee ugu fiican ee bukaannada loo qaadayo shaqaalaha caafimaadka ama qofka masuulka ka ah. Sidaa daraadeed, waxaa hubaal ah in bukaanku si joogto ah u qaataan daawooyinka iyada oo aan hakad gelin. Dhamaan dawooyinka loo isticmaalo daaweynta cudurka qaaxada ee dalkeena waxaa soo foodsaaray Wasaarada Caafimaadka sanado badan waxaana la siiyaa bukaanada bilaash ah iyada oo loo marayo Qaaxada Qaaxada. (Waxaa laga soo xigtey: afhayeenka)
Metrobüste xoogga 'nidaamka caqliga' ayaa ka sarreeya
Metrobüste Jadwalka Tarbiyada
Cufnaanta Barafka Metrobuste (Video)
Metrobüste wuxuu jecelyahay dagaal
Waxaan maqlay maqaarka markii aan ku seexday Metrobus
Metrobus wuu jabsaday lugta
Ma fariisanin aniga oo ku jira metrobus (Video)
Muraayadaha Metrobus ayaa baxa
Metrobust wuxuu joojin doonaa badhanka la dagaallanka dhiigga
Tallaabada Metrobus (Video)
Khatarta Cusub ee Isgaadhsiinta İzmir! Teh Strike ee Metro
Digniinta Shilalka ee Carom Pre-Yarn